क्रिप्टोकरेन्सीलाई भुक्तानीको रूपमा स्वीकार गर्ने फाइदाहरू - Victor Mochere
पहिलो डिजिटल मुद्रा, बिटक्वाइन, सिर्जना भएदेखि, संसारमा एक वास्तविक वित्तीय क्रान्ति सुरु भएको छ। र cryptocurrencies अझै पनि फरक रूपमा बुझिन्छ। कसैले यसलाई नयाँ भुक्तानी वास्तविकताको रूपमा हेर्छन्, कोहीले क्रिप्टोमा पैसा कमाउन चाहन्छन्, र अरूहरू शंकास्पद छन् र यसलाई अस्थायी घटनाको रूपमा मात्र बुझ्छन्।
यद्यपि, यदि वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने, डिजिटल पैसाले हामीलाई बैंकहरू र नियामकहरू, आयोगहरू र शुल्कहरूबाट बचाउनुपर्दछ। तिनीहरू सस्तो र प्रयोग गर्न सजिलो छन्। व्यवसायहरूले क्रिप्टोमा चासो लिन्छन् किनभने तिनीहरू काम गर्न सुरक्षित र अधिक प्रभावकारी तरिकाहरू खोजिरहेका छन्। धेरै कम्पनीहरूले डिजिटल पैसालाई भुक्तानीको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्।
एक cryptocurrency के हो
जहाँ क्रिप्टो मार्फत भुक्तान गर्ने
क्रिप्टो लेनदेनको फाइदाहरू
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, क्रिप्टोकरेन्सी सिक्का मिलेर बनेको डिजिटल मुद्रा हो। सिक्का नक्कली विरुद्ध सुरक्षित छ किनभने यो ईन्क्रिप्टेड जानकारी हो जुन प्रतिलिपि गर्न सकिँदैन। यसरी, नाम "क्रिप्टो" को एक भाग हो। Cryptocurrency इन्टरनेटमा मात्र अवस्थित छ। तपाइँ यसलाई तपाइँको इलेक्ट्रोनिक खातामा पठाउनको लागि प्रिन्ट गर्न, छोउन वा बैंकमा लैजान सक्नुहुन्न। यसको मूल्य अनियन्त्रित छ, त्यसैले मुद्रास्फीतिले यसलाई असर गर्न सक्दैन। न त बैंकहरू, न सरकार, न क्रिप्टोकरेन्सीको निर्माताको यसमा पहुँच छ।
आखिर, क्रिप्टोकरेन्सी ब्लकचेनमा भण्डार गरिएको छ - एकल नियन्त्रक नभएको प्रणाली। ब्लकचेन धेरै सहभागीहरू द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ। गणितीय गणनामा निर्मित, प्रणालीले डिजिटल मुद्रालाई नक्कली वा ह्याकिङबाट जोगाउँछ। यदि तपाइँ क्रिप्टोकरन्सी कहाँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग धेरै विकल्पहरू छन्। अनलाइन वा अफलाइन एक्सचेन्जरहरू, क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू, P2P प्लेटफर्महरू, टर्मिनलहरू - यी मध्ये कुनै पनि योग्य छन्।
क्रिप्टो प्रशोधन ग्राहकहरूलाई थप सुविधाजनक भुक्तानी विधि प्रस्ताव गर्ने उत्कृष्ट अवसर हो। धेरै अनलाइन स्टोरहरू र सेवाहरूले पहिले नै क्रिप्टोकरेन्सीहरू स्वीकार गरिसकेका छन्, किनभने तिनीहरूले यसलाई भविष्यमा उनीहरूको वृद्धिको स्रोतको रूपमा हेर्छन्। तसर्थ, आजकल अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको लागि क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूले आफ्ना निबन्धहरूको लागि भुक्तान गर्ने साइटको उपस्थिति अब कुनै नवीनता होइन। र यो सामान्य कुरा हो - निबन्ध लेख्नु - केहि दुर्गम वा जटिल होइन, जुन सामान्यतया क्रिप्टोकरन्सीसँग सम्बन्धित हुन्छ। हामी यो सेवालाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौं। हामी अहिले दैनिक जीवनमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्छौं।
यहाँ क्रिप्टो लेनदेनको केही फाइदाहरू छन्।
1. कुनै क्षेत्रीय प्रतिबन्धहरू छैनन्
Cryptocurrency लेनदेन अवरुद्ध लगभग असम्भव छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्नेहरूको लागि ठूलो फाइदा हो। तपाईं कुनै पनि देशमा भर्चुअल मुद्राहरू पठाउन र कुनै पनि समयमा भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ बेफाइदाहरू पनि छन् - तपाईंले पठाएको लेनदेन रद्द गर्न सक्नुहुन्न। यसले ग्राहकहरूलाई खरिद गर्दा र रकम पठाउँदा थप सतर्क हुन आवश्यक छ। कोषको स्थानान्तरणको लागि कुनै आयोग छैन र त्यहाँ कर तिर्न आवश्यक छैन, किनकि बिटकोइनहरू कुनै पनि देशसँग बाँधिएका छैनन् र सरकारहरूले तिनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दैनन्।
विश्वसनीयता केन्द्रीकरण भन्दा वित्त विकेन्द्रीकरणको मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक हो। लेनदेनहरू केन्द्रीय रूपमा नियन्त्रित छन्, अर्थात्, बैंकहरूले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्न, फ्रिज गर्न, र यस्तै गर्न सक्छन्। क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनहरू कुनै पनि कुराद्वारा विनियमित हुँदैनन्, त्यसैले तिनीहरूलाई रद्द गर्न सकिँदैन। कसैले क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन रोक्न सक्दैन। साथै, विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरन्सीले व्यापार मापन गर्न सजिलो बनाउँछ। यदि तपाइँ उत्पादन वा सेवाहरू बेच्नुहुन्छ भने, क्रिप्टोले तपाइँलाई विदेशबाट भुक्तानहरू स्वतन्त्र रूपमा स्वीकार गर्न, तपाइँको सम्भावित दर्शकहरूलाई विस्तार गर्न र तपाइँको क्यारियरलाई बढावा दिन अनुमति दिन्छ।
3. उच्च लेनदेन गति
क्रिप्टो लेनदेनको लागि मध्यस्थकर्ताहरू आवश्यक पर्दैन, त्यसैले पैसा धेरै छिटो खातामा आउनेछ। र किनकी लेनदेन तात्कालिक हुन्छन्, तिनीहरूलाई रोक्न सकिँदैन। साथै, व्यक्तिगत उद्यमी वा कानुनी संस्थाको रूपमा दर्ताको आवश्यकता पर्दैन - तपाइँ तपाइँको नागरिकता को बावजूद, एक व्यक्ति को रूप मा cryptocurrency भुक्तान स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्लकचेन डाटा नक्कली वा प्रतिलिपि गर्न सकिँदैन। तिनीहरू क्रिप्टोग्राफीको साथ इन्क्रिप्टेड छन्, र तिनीहरूलाई चोर्न वा ह्याक गर्न जति सजिलो देखिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर तपाईंले आफ्नो क्रिप्टो वालेटहरूबाट पासवर्डहरू भण्डारण गर्ने सुरक्षाको बारेमा याद गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई हराउनुभयो भने, तपाईंले तिनीहरूलाई पहुँच गर्न बिर्सन सक्नुहुन्छ।
ईकमर्सको निरन्तर विकासले भुक्तान विधिको रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको द्रुत कार्यान्वयनको नेतृत्व गरेको छ। र यसले पहिले नै उद्यमी र तिनीहरूका ग्राहकहरू दुवैको लागि आफ्नो सुरक्षा प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले भुक्तानका लागि क्रिप्टोकरेन्सीहरूको प्रयोग यति लोकप्रिय हुँदै गइरहेकोमा कुनै आश्चर्य छैन। आखिर, एक उद्यमीले अधिक भुक्तानी विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, यो उनको लागि अधिक लाभदायक छ। यस तरिकाले तपाईले नयाँ लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, जसले डिजिटल मुद्राबाट मात्र भुक्तानी गर्न रुचाउँछ, साथै भुक्तानीमा रूपान्तरण बढाउन।
टैग: Cryptocurrencyअनलाइन भुक्तानी